Top 5 iPhone Photo edezi égwu - Best Photo Editors maka iPhone
> Resource> iPhone> Top 5 iPhone Photo edezi égwu maka Dezie Photos on iPhone
iPhone niile bụ ọnụma ugbu a na ị ga-chọrọ dezie foto gị na iPhone. E nwere nnọọ ọtụtụ foto edezi ngwa ọdịnala n'ihi iPhone on AppStore na ọ bụ n'ezie ike ikwu nke na otu onye bụ ezi ma ọ bụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ n'ezie iji ezi iPhone foto edezi ngwa dezie na retouch foto gị na iPhone, dị nnọọ eso isiokwu a na-n'ezie oké foto nchịkọta akụkọ maka iPhone.
N'isiokwu na-esonụ, n'elu 5 foto edezi ngwa ọdịnala n'ihi iPhone na-depụtara maka gị akwụkwọ. Dị na-agụ ma bulie na onye na-amasị.
Best iPhone foto edezi ngwa 1: PowerCam - Real-oge foto edezi
PowerCam bụ a free na-akpali akpali foto edezi ngwa n'ihi na iPhone mepụtara Wondershare. Na ya, i nwere ike ide ezigbo oge mmetụta aka gị captures dị ka a anwansi. Ọ bụ free maka mmachi oge. Ugbu a, gị creativity free na 50+ mmetụta, gụnyere tilt nnofega, agba ikwommiri, osisi, wdg Your captures nwere ike ịbụ ozugbo òkè na YouTube, Flickr, Facebook, Twitter, Tumblr, na ọtụtụ ndị ọzọ. Nke a foto edezi ngwa n'ihi na iPhone akwado a otutu, gụnyere asụsụ English, Chinese, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Spanish. N'ezie kediegwu, ọ bụghị ya? Mụta ihe banyere PowerCam >>
Best iPhone foto edezi ngwa 2: Photoshop Express - free
Adobe Photoshop Express bụ a free iPhone foto edezi software nke na-enyere gị retouch foto gị na ala. Photoshop Express na-enye dị mfe na elu video edezi atụmatụ iji nyere ọrụ ime mgbanwe, akuku photos, wdg site nnọọ swiping na-adọkpụpụta mkpịsị aka gị gafee ihuenyo.
Best iPhone foto edezi ngwa 3: Igwefoto + - 59p
Igwefoto + bụ a igwefoto na ngwa na-enye ọtụtụ ikpughe mmetụta dị ka anyanwụ dara, backlit, Urukpuru, wdg a ngwa n'ihi na iPhone foto edezi abịa na ihe dị mfe na-eji interface na awade oké image edezi atụmatụ dị ka fipping, n'usoro n'usoro, ala ma cropping.
Best iPhone foto edezi ngwa 4: Instagram - Free
Instagram bụ n'ezie ihe iPhone foto nkekọrịta ngwa na ụfọdụ foto edezi atụmatụ. Iji ya, i kwesịrị ịmepụta otu akaụntụ mbụ. Mgbe ị debanyere, ị pụrụ ịgbaso ụfọdụ ndị enyi ntị ka ha na-akọrọ photos ma tinye foto gị iPhone Photo Library ịgbakwunye ụfọdụ foto mmetụta aka na photos.
Best iPhone foto edezi ngwa 5: FX Photo Studio - $1.99
FX Photo Studio abịa na ruru 181 foto mmetụta aka photos ozugbo. Wezụga ya, ọ na-awade ụfọdụ isi foto edezi ọrụ dị ka cropping, foto agba mgbanwe, wdg a iPhone foto ngwa ukwuu nabatara ndị na-amasị tinye nzacha ka photos. Ihe bụ ihe ọzọ, i nwere ike ịkọrọ gị foto Facebook, Twitter, wdg
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ a ọzọ dị ike na Njirimara ọgaranya edezi ngwá ọrụ, ị ga-mma na-a desktọọpụ video edezi ngwa dị ka DVD ngosi mmịfe Nrụpụta. Na ya, ị nwere ike mfe efegharị foto gị na okwu n'ime kediegwu slideshows!